लालीगुराँसमा हुन्छ यस्ता औषधीय गुण, यसरी गर्ने प्रयोग ? - Saptakoshionline
लालीगुराँसमा हुन्छ यस्ता औषधीय गुण, यसरी गर्ने प्रयोग ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०५, २०७६ समय: ५:३५:३६
लालीगुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल हो । लालिगुराँस नदेख्ने सायदै नहोलान् । यसलाई देखे पनि यसको फाइदा बारे जो कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ ।
लालीगुराँस देख्नमा जति सुन्दर हुन्छ, स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ । पहाडी तथा हिमाली भु–भागमा लटरम्म फुल्छ लालिगुँरास ।
गर्मीमा लू, रुघाखोकी, ज्वरोजस्ता अनेकौं रोग भगाउन लालिगुराँस महत्वपूर्ण मानिन्छ । गुराँसको फूलबाट तयार पारिएको जुस तथा अन्य उत्पादन सेवन गर्नाले मुटु स्वस्थ हुनुका साथै शरीरमा रगतको मात्रा बढाउन समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ । लालीगुराँसमा पाइने औषधीय गुण यस्ता छन-
रोडोडेन्ड्रन प्रजातिको यी फूलहरु रातो, सेतो र निलो फुल्ने गर्दछ । रातो फूल औषधीय गुणले भरपूर हुन्छ ।
विशेषगरी हृदय रोगबाट पीडित व्यक्तिले प्रतिदिन एक गिलास लालीगुराँसको जुस पिउन सकेमा एकदमै फाइदाजनक हुने चिकित्सक बताउँछन् । लालीगुराँसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्न नदिई हृदय रोगसँग सम्बन्धित अन्य खतरा न्यून गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
लालीगुराँसको जुसको प्रयोगले शारीरिक विकास र रगतको कमी हुन दिँदैन । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइनले गुलाबी रंग तथा सेतो रंगको लालिगुराँमा पनि उत्तिकै औषधीय गुण हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा फूल्ने लालिगुराँसलाई कतै कतै चिमाल पनि भन्दछन् ।
यसको नियमित सेवनले रक्तचाप बढ्न दिँदैन । उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि लालिगुराँसको जुस उत्तम मानिन्छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बी हुने गर्दछ । मौसम परिवर्तनका समयमा भिटामिन बीको कारणले शरीरमा परिवर्तन आई अनेकौं रोगहरु जस्तै खोकी, ज्वरो आउने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा गुराँसको जुसले औषधीकै रुपमा काम गर्दछ ।
लालीगुराँसको जुसको सेवनले मृगौला सम्बन्धी रोगबाट बचाउन मद्दत गर्दछ । नियमित गुराँसको जुस सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता समेत विकास गर्दछ ।